Macluumaad faa'iido leh oo loogu talagalay qof kasta | Kuwa aqoonta u baahan oo wax u oomman aqoonta!
Lacago dheeri ah waa mushkilad casri ah oo saameysa inta badan dadka adduunka. Waxaa jira habab fara badan oo kala duwan oo aad isku dayi karto inaad dhibaatadaas uga takhalusto, waxay ku saabsan tahay iyaga iyo ...
Gu'gii waa yimid - waa waqtigii miisaanka lumi lahaa
Waa wax xiiso leh in badanaa guga haweeney (iyo rag badani) xasuustaan ​​inaad u baahan tahay inaad miisaan lumiso! Rabitaankani wuxuu la xiriiraa qorrax dhalaalaya oo firfircoon, isbedelka dharka dharka qaboobaha oo loo beddelayo mid ka fudud ...
Sida loola tacaalo yaraanta fitamiinada guga
Guga ayaa yimid. Subaxda hore shimbiraha ayaa ku dhawaaqaya daaqadda dibedda, laakiin way adag tahay in la toosiyo, oo shaqada ka dib xoogana aan ku filnayn wax kasta. Badanaa waxaa jira dareen ah in berri ...
Miisaan culeys wanaagsan oo caafimaad leh
Mid ka mid ah qaababka waxtarka leh ee loo lumiyo miisaanka waa habka Dr. Gavrilov. Barnaamijka miisaanka luminta waxaa ku jira dhowr marxaladood. Maskax ahaan si sax ah u habeeya miisaan luminta, aqoonsashada sababaha nafsadda ee xad-dhaafka ah; Baro ...
Telefoonada casriga ah ee Nokia 2.3 waxay heshay madax-bannaani ilaa maalmo 2
HMD Global ayaa ku dhawaaqday taleefoon cusub oo miisaaniyada Masar ah. In kasta oo badidoodu ay filayeen bilawga Nokia 8.2, dhab ahaantii munaasabadda ayaa loogu talagalay in lagu bilaabo Nokia 2.3. Kani waa qalab soo-galooti heer-gal ah ...
Dheecaanka Dheecaanka ah ee loo yaqaan 'Spice Plum Cake Recipe'
Pium pie ayaa leh cajiin jilicsan, oo casiir leh oo leh dhadhan basbaas leh, kaas oo siinaya qorfe iyo sinjibiil. Quudinta macaan iyo kuwa macaan, waa wax aan macquul aheyn in la qaato waxyaabaha wax lagu daro! Waxyaabaha loo yaqaan 'Pum Pie' - Recipe ...
Raspberry Qaboojiyaha Berry barafoobay - Sida loo Sameeyo
Xilliga raspberry, haween badan oo guryo leh ayaa laga yaabaa inay u diraan berry caafimaad leh si ay u qaboojiso - kaydinta illaa jiilaalka. Kaydadka waxaad ka samayn kartaa khamri macaan oo aad ku kaaftoomi karto fasaxyada. Cabitaanka waa la helay ...
Huawei waa iibiyaha ugu weyn ee 5G ee Russia
Arrimaha la xiriira dagaalka ganacsiga ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka, halkaas oo Huawei ay ku taal xarunta doodaha, mararka qaarkood waxay leeyihiin xaalado xiisa leh. Ruushku wuxuu go’aansaday in Shiinuhu uu noqdo iibka ugu weyn ee kaabayaasha 5G. Ruushka ...
Kuwa inta badan booqda goobaha dalxiisyada adduunka ee caanka ah, shaki kuma jiro, inay ku ag maraan waddan la yaab leh sida Spain. Ku nasan geeskan adduunka waxaay la micno tahay meelo raaxo leh! Dalkan ...
Sida loo raaco cuntada tubta loogu talagalay miisaanka oo yaraada
Xilliga deyrta, mid ka mid ah cuntooyinka ugu caansan waa tubta. Goosashada qani ah ee bislaado iyo plomme caafimaad leh waxay kuu oggolaaneysaa inaad u isticmaasho miraha si aad u raacdid cuntooyin kaladuwan: dhakhso, dheer, cunto-cunis ama isku dar. Cuntada Plum: Faa'iidooyinka Wehelida Miisaanku ...
Sida loo nadiifiyo sinta dahabka ah - Siyaabaha 6
Dahabku waa bir aad u qurux badan, qaali ah, laakiin xitaa haddii waqti lagu lumiyo waayihiisii ​​iftiinka iyo jiilaalka. Dahabka dahabiga ah - pendant iyo pendant - waxay noqdaan wasaq iyo fajac, ku daboolo huurada dufanka leh. Waxay ...
Suugo 3 loogu talagalay jibiska ama hilibka
Ka mid ah noocyada kala duwan ee suugada fudud, waxaan si gaar ah u jeclahay saddexdaan. Waxaan had iyo jeer karsadaa mid ka mid ah hilibka, digaagga, guriyada laga sameeyay ama la iibsaday, makrooni, cunno fudud iyo waxyaabo kaloo badan. Runtii ...
Suugada loogu talagalay dhadhan kasta: TOP-5 cuntada sida hilibka loo dubay, hilib cunnada iyo suxuunta ugu muhiimsan
Suugadaas cajiibka ah ee cajiibka ah ayaa ah kuwo aad u fiican oo loogu daro suxuunta aad ugu jeceshahay. Iyaga oo leh, cuntooyinkaaga fudud waxay noqon doonaan kuwo xiisa badan. Xulashada cuntada. Maraqa jiis digaaga 200 gr oo ka kooban maaddooyinka soodhada leh: 110-120 gr farmaajo; ...
Dhiroonka lagu rusheeyey tufaax - dhadhan aan caadi ahayn!
Cuntadaani qajaar la ruugay, qajaar ayaa ka duwan dadka kale ee jilicsanaanta iyo soodhiska ee tufaaxyada cagaaran ee noocyada cagaaran ay ku bixiyaan. Shaashaddu waa mid udgoon oo dhadhan fiican leh, isku darka qajaarka iyo miraha ku jira waxay bixisaa muuqaal soo jiidasho leh ...
Cuntada asalka ah ee okroshka oo leh cusbada cusbada leh
Xilliga xagaaga, inbadan ayaa miiska okroshka ku yaal. Maxaa jira si loo qariyo, jacaylka muwaadiniinta aan wadaagno ee saxankaan la ogyahay. Noocyada kala duwan ee okroshka ayaa looga adeegi doonaa kafateer kasta iyo makhaayad kasta, iyo ...
Okroshka dhadhan fiican leh oo leh hilib lo 'ah iyo dhar udgoon leh
Waxaad si adag isugu dayday oo aad u karisay okroshka noocaas ah. Cuntad xiiso leh oo ku dari doonta noocyo kala duwan menu xagaaga. Saxanka waa mid dhadhan fiican oo qanacsan, oo lagu daadiyey kvass la qaboojiyey oo lagu daro waxyaabaha lagu daro, waa wax aad u wanaagsan.
Waa maxay sababta aad u cabto tufaax tufaax ah leh tufaax leh malab miisaan lumis
Cuntada waxa loogu yeero ee khal, marka slimming la soo jeediyo in la cabo tufaax cider tufaax leh malab, qaar badan ayaa shaki qaba. Waxaan isku dayi doonnaa inaan ka saarno shakigaada oo aan sharaxno sababta cabitaanka diyaarka ah ee loo diyaariyey ay runtii u shaqeeyaan ...
Cuntada Cunnada - Sandwich Cake
Way fiicantahay in la daawado miiska gala oo dhadhanka cuntada asalka u ah ee afka laga nuugo qaab rooti rooti ah. Cuntadani waa mid qalbi furan, waxay umuuqataa mid kacsan, cunto karinta. Keega rooti ka samaysan waxay u noqon doontaa caawinaad wanaagsan salads xanaaqa.
Cuntada weyn: basbaaska la dubay oo la dubay nuts, hilibka jiiska iyo jiiska - kariska
Cuntadani waxay xaqiiqdi kaa caawin doontaa markaad rabto inaad wax kariso wax asal ah oo fudud. Waxaan u soo jeedinaynaa inaan ku wareejino basbaaska la dubay leh duubyo yaryar, oo aan ku ridno nuts, jiis iyo xoogaa hilib qalalan oo qallalan. Wixii loogu talagalay duubista 8 ...
Sida loo Sameeyo Maraqa Socorida
Liiskaaga dayrta waa inuu lahaadaa maraq bocor. Waxay gacan ka geysan doontaa sidii looga badbaadin lahaa isbeddelka xilliyada, kuleylka cimilada koowaad ee qabow, xoojinta xasaanadda. Xaqiiqdiina, waxaad ka heli doontaa farxad gaar ah dhadhamadeeda qani ah ...
Bixinta - Digaagga Digaagga - 16+
© Copyright 2017 - 2020 Macluumaad faa'iido leh qof walba
Su'aalaha '33' ee ku jira keydka macluumaadka ee laga sameeyay ilbidhiqyada 0,551.